Ny fomba Sy atao mba hahatonga ny fahalalana roa heny haingana kokoa. Ahoana no dredge
Na ao amin’ny trano fisotroana na nandritra ny fotoana voalohany, dia mila atao mba hampitombo ny fitokisana rehefa mizara ny zavatra niainany. Aiza ny olona maro hahazo izany ratsy dia mihevitra izy ireo fa ny ora lany amin’ny fanaovana izany asa dia mitovy ny ora lany mba hanao toy izany amin’ny hafa ary izany dia tsotra fotsiny tsy ny raharaha. Arakaraka izay ataonao milentika, dia ny fahalalana mihoatra na latsaka haingana. Noho izany, nanontany tena ny fanontaniana hoe: ahoana no mba nahalala ny ankizivavy iray haingana kokoa. Omeko anao amin’ny arivo: ny fomba haingana indrindra mba hahafantatra ny tovovavy mandany fotoana miaraka aminy amin’ny tontolo hafa. Midika izany fa raha toa ianao manana niresaka nandritra ny adiny iray ao amin’ny bar, ho kokoa ny fifandraisana haingana nitondra azy mba hipetraka amin’ny seza lava iray ampahefatry ny adiny iray ihany amin’ny sisa ao amin’ny bar ho an’ny mihoatra ny adiny iray.
Ny olona mitondra tena amin’ny fomba hafa ao amin’ny tontolo hafa, ary ho hitanareo ny lafiny vaovao ny maha-izy azy ao mangina ny toerana misy azy. Noho izany antony izany dia hanana ny fahatsapana fa ny fotoana mandalo haingana kokoa isika rehefa nahazo fahafinaretana. Ny ati-doha no toy izany izy, dia mitandrina zavatra amin’ny fombany. Noho izany dia nisy fomba mba manana toa efa nandany fotoana bebe kokoa miaraka mety ho leo tsy mahatahotra. Fa inona no tianao ho lazaina fa: ny atidoha ihany koa ny fahatsapana fa ny fotoana kokoa ny ela, raha mahita hafa tontolo. Amin’ny teny hafa, raha toa ianao mandany adiny roa ao amin’ny fisotroana kafe miaraka amin’ny olona iray, ianao mahatsiaro ho toy ny lany kely kokoa ny fotoana amin’ny izany olona izany noho ny raha toa ka nandany roa heny ny ora roa samy hafa ny kafe. Ny fiovana ny toerana manodidina dia manome ny fahatsapana ny atidoha fa efa roa ny traikefa samihafa io olona io, na dia tsy handany fotoana bebe kokoa miaraka.
Tsy ratsy, tsy misy
Mety ho gaga ianao mahalala ny rehetra fa afaka mianatra eo amin’ny zazavavy nandritra ny daty voalohany, raha fantatrao ny fomba hitondra anareo any. Toy ny fotoana voalohany dia noho ny fotoana voafetra, miezaka ny manao izany manisa tsirairay minitra mba hamorona ny fotoana, ny kokoa matevina araka izay azo atao.
Ny fomba hanaovana izany
Manomboka amin’ny fisafidianana toerana maromaro sy ny mandany fotoana. Araka ny fanandramana, ny mahagaga ny maro dia telo. Amin’ny telo toerana, dia afaka mora foana ny jiro amin’ny iray ilay iray hafa tsy be loatra hustle, foana raha tsy tapaka isan-karazany sy ny fanomezana ny ati-samy hafa ny zavatra niainany mba hamonjy. Na: mivoaka ho an’ny zava-pisotro, maka ny misy sy ny dihy dia mametraka moramora eo amin’ny seranan-tsambon’i. Raha te-hianatra bebe kokoa momba ity teknika ity, dia afaka mandeha mamaky ny maimaim-poana ny mpitari-dalana amin’ny daty voalohany. Ity fomba ity dia tsy mihatra amin’ny voalohany fotoana izay fandaharam-potoana mialoha. Azonao atao ihany koa ny hampihatra izany fotsiny rehefa miresaka tovovavy iray. Ny hevitra dia tsotra, rehefa afaka minitra vitsivitsy, manasa azy ireo mba handeha any ho any aminao fa tsy mandray mivantana ny maro. Amin’ny ankapobeny, dia manasa azy handray ny kafe ary raha tsy maika ary izy tia ahy, izy dia manaiky. Ny lafiny manan-danja dia ny hoe tsy manao na inona na inona; izany no mbola misy toerana ho an’ny daholobe sy fantany fa izy dia afaka hiala na oviana na oviana. Dia tsy lazaina fa betsaka kokoa ny mamaly tsara raha tsaroako ankehitriny fa tsy azoko fotsiny ny lehilahy amin’ny izay dia niresaka indray mandeha aho lehilahy izay izy no mipetraka ao amin’ny fivarotana kafe. Ary izany dia tsy sarotra kokoa noho ny fangatahana. Raha toa izy tsy mety, afaka fotsiny aho hoe,»azoko tsara, ianao maika. Tsara ny mihaino, aho handray ny maro ary tsy afaka manao izany amin’ny fotoana hafa ireo». Tsotra, mahomby, ary farany dia be mahafinaritra kokoa noho ny miresaka ny dimy minitra, ary miala amin’ny ny isa ao amin’ny paosy. Kornelio dia geeky virjiny fa tsy misy teknika ny famitahana na oviana na oviana toa ho afaka ny hamonjy. Mandra-indray andro dia hita fa ny fomba tsara indrindra mba ho tonga seducer dia ny mba hampitombo ny herim-po sy ny vazivazy. Ankehitriny, izany dia mampianatra ny olona mba hanova ny fiainany amin’ny fomba toy izany koa ny toerana Famitahana Academy, ary ny mazava ho azy fa ny famitahana maimaim-poana
← Arabo ny tovovavy ho an'ny fanambadiana - Sarimihetsika Fikarohana amin'ny Fikarohana
Ahoana no Hihaona sy ny Daty manan-Karena Arabo ny Olona ho avy scopes →